Haweenayda arrimaha dibedda ugu qaybsan Midowga Yurub oo jac aad u kulula kala kulantay Benjamin Netanyahu (Maxaa dhacay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Haweenayda arrimaha dibedda ugu qaybsan Midowga Yurub oo jac aad u kulula...
Haweenayda arrimaha dibedda ugu qaybsan Midowga Yurub oo jac aad u kulula kala kulantay Benjamin Netanyahu (Maxaa dhacay?)
(Tel Aviv) 09 Juun 2018 – Haweenayda arrimaha dibedda ugu qaybsan Midowga Yurub ee Federica Mogherini ayaa kansashay booqasho ay ku tegi lahayd Israel maalinnimada Axadda berri ah, sida ay faafinayso warbaahinta dalkaasi.
Sida uu baahinayo hilinka Channel Two, Mogherini ayaa sidoo kale qorshaynaysay inay ka qayb gasho Shirka Caalamiga ah ee uu abaabulo Golaha Yuhuud-Maraykanka (oo ah urur aan dowli ahayn oo u dhaqdhaqaaqa danaha Israel) kaasoo Isniinta soo socota ka dhacaya Qudusta la haysto.
“Mogherini waxay baabi’isay booqashadeeda kaddib markii uu kulankeeda ka gaabsaday Raysal Wasaaraha Yuhuudda ee Benjamin Netanyahu,” ayuu yiri hilinku.
Wuxuu intaa ku daray in Mogherini ay codsi rasmi ah u dirsatay xafiidka Netanyahu si uu u darbo kulan dhexmara labadooda, balse aanu xitaa usoo jawaabin.
Channel Two ayaa ilo siyaasadeed oo Israeli ah kasoo xigtey in uu Netanyahu iyaga u sheegtay “inuu jadwalkiisu ciriiri yahay”, balse waxaa la fahamsan yahay inay diidmadiisu salka ku hayso wax lagu sheegay “mucaaradeedda cadaawadeed ee ka dhanka ah Israel”.
Previous articleNINKII I QALAY I QUUDIN MAAYO: Falastiiniyiinta oo diidey afur uu Imaaraatku ka qaybinayay Masjidka Qudus
Next articleSIR LA XADAY: Shiinaha oo Maraykanka oo soo jeeda ka xaday xog muhim u ah Ciidamada Badda Maraykanka!